Nke A Ọ Bụ The Future of Ọrụ? - News Ọchịchị
Nke A Ọ Bụ The Future of Ọrụ?
Australian ọkà mmụta sayensị gị n'ụlọnga CSIRO-ekwu ebe ọrụ ga-esiwanye digitally uche n'ihe na akpaghị aka. Onye chọrọ ịbụ onye na-'online chaperone'?
Isiokwu a na-akpọ “Bụ nke a ga-eme n'ọdịnihu nke ọrụ? Ndị ọkà mmụta sayensị ịkọ nke ọrụ ka ga na-emeghe ka ụmụ mmadụ na 2035” dere Paul Karp, n'ihi na theguardian.com on Friday 26 February 2016 05.41 UTC
Ndị ọrụ na-achọ ọrụ na 2035 nwere ike ịtụle mmughari dị ka remote-achịkwa ụgbọ rụọ ma ọ bụ online chaperones.
Ndị bụ ndị abụọ nke ọrụ nke ga-eme n'ọdịnihu na-atụ aro na a akụkọ site CSIRO na chaatị dị iche iche afọ 20 na ọnọdụ na-esiwanye digitally lekwasịrị anya na akpaghị aka Australian ebe ọrụ.
Related: Na akpaaka nwere ike ịpụta a post-arụ ọrụ otu ma anyị kwesịrị atụla egwu
The ọrụ ozi, Michaelia ego nkịtị, wepụtara akụkọ on Friday na Australian Computer Society ogbako.
Ego kwuru na akụkọ gosiri "ụfọdụ ọrụ ga-apụghị izere ezere-aghọ akpaghị aka na-abịa abịa afọ ma nkà na ụzụ mgbanwe ga-mma ndị ọzọ na nwekwara ike ike ọrụ na ohere".
"The ọdịnihu ya agaghị abụ banyere ndị mmadụ sọọ mpi na ígwè ọrụ, ọ ga-abụ ihe ndị na-eji ígwè ọrụ na aru oru nke na ọzọ na-akpali na imezu ya,"Ka o kwuru.
The akụkọ na-egosipụta isii Mega-na ọnọdụ na-arụ ọrụ ego, ndị kasị mkpa nke nke bụ ihe "gbawara ngwaọrụ Njikọta, data mpịakọta na Mgbakọ ọsọ, jikọtara na ngwa ngwa ọganihu na akpaghị aka na usoro na Amamịghe echiche pụtara na robotic ngwaọrụ nwere ike igosi na ọtụtụ ihe aga-eme ọsọ ọsọ, n'enweghị ihe na-rụọ ọrụ nke ọma karịa ụmụ mmadụ ".
Ụba akpaaka ga-mgbagwoju anya nke ndị ọrụ 'ihe aga-eme. "Ọtụtụ dị ala-ọkà ọrụ a na-offshored ma ọ bụ akpaghị aka. The pụta bụ likelihood nke a mere ka nkà na-akụziri mmanya n'ihi na ntinye n'ime ọtụtụ Ọrụ na occupations,"Ka akụkọ ahụ kwuru.
The ikpeazụ ọrụ on Earth: eche a n'ụzọ zuru ezu akpaghị aka ụwa - video
The akụkọ hụrụ sayensị, technology, injinịa na mgbakọ na mwepụ (azuokokoosisi) ihe ọmụma na-eji na 75% n'ime ihe ndị kasị na-eto eto occupations na kwara arịrị, na "Australian na-eto eto si egosi na ada ada mmasị na arụmọrụ na Azuokokoosisi".
Ọzọ emekarị bụ ihe atụ anya ịrị elu ke onwe-ọrụ na freelancing mere site ọgbọ na-ọgbọ nyiwe Upwork, Kaggle, Innoventive na Freelancer.com, nke akụkọ na-ekwu "na-enye uru site na mma, ala na-egbochi ntinye na ụba ọsọ enyere ndị mmadụ aka ịgbanwe oge ha na n'ime ụgwọ ọrụ ".
The akụkọ ahụ kwuru mgbe freelancing "adịghị ma jidere aka na Australia, ọ bụ a nnukwu (na-eto eto) ọrụ nlereanya na mba ndị ọzọ ", dị ka na America ebe otu n'ime atọ ndị ọrụ bụ otu nọọrọ onwe ha ngo.
Related: Ilọn Musk: Na naa ụgbọala ga-enwe ike gafee US na-enweghị ọkwọ ụgbọ ala na afọ abụọ
Ọ bụrụ na ezigbo ọrụ adịghị adị, na onye ọrụ nwere ike ịdị mkpa ka O kere ya, akụkọ na-atụ aro. "Entrepreneurial nkà ga di esiwanye mkpa maka obere azụmahịa founders na ọrụ n'ime nnukwu òtù,"Ọ sịrị.
The akụkọ buru amụma ọrụ industries, karịsịa agụmakwụkwọ na ahụike,, ga-anọgide na-achụpụ ọrụ e kere eke, pụtara "na-elekọta mmadụ na mmekọrịta nkà na nke mmetụta uche ọgụgụ isi ga-aghọwanye mkpa".
Akuko a siri na Australia si arụ ọrụ ego ga-adị iche, na otu onye n'ime ise ndị Australia akarịala iri afọ 65 na 2035, elu nwaanyị òkè na a nnukwu nkezi nke akwaga mba ọzọ ịbụ nke na-arụ ọrụ afọ.
Akuko a siri na ọrụ na ọnọdụ ga-eme ka ọrụ ọhụrụ ụdị, na speculated ndị a nwere ike ịgụnye "ibu nnukwu data nnyocha na", mgbagwoju mkpebi support nnyocha, remote-achịkwa ụgbọ rụọ, ahịa ahụmahụ ọkachamara, onye preventative ahụ ike helpers na online chaperones.
"The ịrị elu nke un-crewed ugbo ala na-enye ịrị elu a ọhụrụ arụ ọrụ ego nke ụgbọelu, ọkwọ ụgbọala na ụgbọ iche ụgbọ na-eme ha n'ọrụ ha ghara si na mbara igwe, oké osimiri ma ọ bụ nke m na saịtị, ma site na ụlọ ọrụ dị na a na n'ime ime obodo na ọnọdụ,"Ka akụkọ ahụ kwuru.
Related: Gịnị ka ọ pụtara ịbụ ụmụ mmadụ na nkà na ụzụ?
Na a okwu na-a-arụ ọrụ ego arụpụtaghị ogbako 8 December, Australian Council of Trade ịlụ odeakwụkwọ Dave Oliver dọrọ aka ná ntị "oké mgbanwe n'ihu site ugbu a nkà na ụzụ ọganihu na-dapụtara na a miri, wider na ndị ọzọ na-adịgide adịgide hollowing nke ọrụ ahịa ".
ọ si a na-adịbeghị anya CEDA akụkọ gosiri 5 nde ọrụ (40% nke Australian arụ ọrụ ego) -eche ihu a nnukwu gbasara nke puru omume a na-anọchi kọmputa na-esote 10 ka 15 afọ.
"N'agbanyeghị na ọtụtụ uru nke nkà na ụzụ ọhụrụ, anyị emecha na-achọ izere na slide ka a ọrụ ahịa n'elu ikpo okwu na-amanye ndị ọrụ iji sị megide onye ọ bụla ọzọ n'ihi na ngwugwu nke ọrụ na ụdị ụfọdụ nke obi ọjọọ, laa azu eBay-style auction,"Oliver kwuru.
Related: The dike nke wuru ọgụgụ isi: nwere ike a amamihe na-ya na ego?
"Ihe ịma aka nye anyị nile - ịlụ, ewe mmadụ n'ọrụ, regulators na ọchịchị - bụ njikota nkà na ụzụ ohere na-eme ka ha na-arụ ọrụ maka, kama megide, ọrụ ọdịmma kasịnụ,"Ka o kwuru.
Ego si "karịa mgbe ọ bụla, agụmakwụkwọ na ọzụzụ ndị dị mkpa maka ihe ịga nke ọma ọrụ ahịa. site 2019, ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ dị maka ukwuu-ọkà ọrụ na atumatu olu-eme ihe karịrị okpukpu abụọ nke ọnụ ọgụgụ dị na 1991.
"Olee Australia si arụ ọrụ ego n'ego ụgbọ ke ogologo okwu ga-adabere na anyị nwere ike iji nyere ndị ọrụ na-eme ikwu n'ụzọ na-ọhụrụ na ọrụ ndị ka mma. Anyị nnukwu ihe ịma aka ga-iji hụ na ọ dịghị onye na-hapụrụ,"Ka o kwuru.
28708	4 Nkeji edemede, Amamịghe echiche (Ai), Australia ozi ọma, Australian na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Business (Australia), CSIRO, Employability, Michaelia ego nkịtị, News, Paul Karp, ígwè ọrụ na-, Technology, ọrụ & ọrụ
← Microsoft Mkpa Book Review A ngwa nju oyi Way inwale Brain Surgery Ọrịa →